China FOXI iced out gold ankh cross pendant olu akwa N'ogbe Pendant obere cross olu obere nwa ọla ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta | Foxi
FOXI iced out gold ankh cross pendant necklace Wholesale Pendant obere obe akwa olu obere nwa ọla
Mkpọ: 18K Gold plated, Gold plated, Platinum plated, Rose Gold plated
Nọmba nlereanya: P906
Oge: Emume ncheta afọ, njikọ aka, onyinye, oriri na ọ ,ụ ,ụ
Product aha: Gold baths joias zirconias colar na-amaghị nwoke maka ụmụ nwanyị
Isi Nhọrọ Stone: cubic zirconia, iko, fusion nkume, nano
Ihe nlele: nyere n'efu
Oge Production: 15-30 ụbọchị ọrụ
Mbupu ụzọ: DHL UPS EMX TNT Fedex
OEM / ODM: Anabatara Obi Weltọ
Tdị ETdị: Black IP na Oxidized Stainless Steel CROSS DIMENSIONS: 2.16 ″ L x 1.04 ″ W x .22 ″ H Chain: 26 ″ Box Chain na 2 ″ Extender
Ekike atụmatụ: Nke a na-aga nke ọma na nke a na-ewu ewu Steve Madden Igbe Chain Abụọ Igwe anaghị agba nchara Diagonal Design Cross Pendant Necklace For Men is on a 26 ″ chain with a 2 ″ extender for a slight length of 28 ″
Na-enye nnukwu onyinye maka ya: The zuru okè kwa ụbọchị Mens ngwa. Na-eme nnukwu onyinye maka nna, nwanne nwoke, nwa nwoke, nwa nwa, nna nna, di, enyi nwoke, otu puku afọ, afọ iri na ụma, ezigbo enyi ma ọ bụ nwoke ọ bụla pụrụ iche na ndụ gị! Ezigbo mma maka oge pụrụ iche, nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, nzukọ azụmahịa, ihe omume pụrụ iche, ụbọchị abalị, mmanya mitzvah, njem, ezumike, ma ọ bụ ihe omume ezumike ọ bụla.
Onyinye onyinye gụnyere: IFzụta ọ bụla na-abịa obere akpa ọla mara mma nke na-agbakwụnye mmetụ zuru oke nke ịdị mma maka inye onyinye ma ọ bụ nchekwa onwe.
DESIGNER BRAND: Site n'ike mmụọ nsọ site na nkume na mpịakọta na mgbọrọgwụ New York, ọhụụ Steve Madden iji nye ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ohere ịpụta iji gosipụta na ha bụ onye ọhụụ, na-atụ ụjọ ma na-akpali akpali. Nghọta ya banyere ọnọdụ na ike na-enweghị atụ emeela ka atụmatụ ya bụrụ nke ejiji. Ọ gbasaa aha Steve Madden ka ọ bụrụ ezigbo ndụ na ebe ọ ga-aga akpụkpọ ụkwụ, akpa aka na ngwa. Obu ihe gbasara eziokwu. Ọ bụ banyere ịnakwere ụdị onye ọ bụla. Ọ bụ Steve Madden.
Nke gara aga: Xmụ nwanyị FOXI ọla ọcha ọla edo plated ụmụ nwoke na-amịpụta ọla na-egbu maramara mgbaaka mgbaaka mgbaaka mgbaaka
Osote: FOXI Mexico Rainbow N'ogbe ejiji obi imewe ọla ntị 14K 18K gold plated inyom cz agba hoop ọla ntị
nwa obele olu
Ihe olu obe
Tennis Chain Olu, Ahụ ọla, Chain Chains, Butterfly Ihe eji eme ihe, Butterfly Tenis Chain, Olu ọlaọcha,